မည်သည့် Android တွင်မဆို Motorola ပြခန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, ဓာတ်ပုံ, Motorola က
ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Android အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကအဆင်ပြေစွာသယ်ဆောင်လာတဲ့အခြား Android terminals များ၏ application များကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်များတွင်ပျော်မွေ့စရာမလိုဘဲ၊ ယနေ့၊ Xperia Z3 Lollipop ကီးဘုတ်ယခုငါအတူတူလုပ်ဖို့လိုသည် Motorola ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြခန်းအက်ပ်.
သင်ပျော်မွေ့လိုပါကယခုသင်သိပြီ Motorola စစ်ဌာနချုပ်စင်တာ သို့မဟုတ် အဆိုပါ Motorola ပြခန်း app ကိုကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်း၏ပုံမှန် Moto X၊ Moto G o Moto E ကို 2015ဤအကြံပြုစာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အဆင်ပြေစေရန်သင်သည်ရိုးရိုး APK ဖိုင်ကိုသာဒေါင်းလုပ်ရယူရန်လိုအပ်သည် ရှုပ်ထွေးသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပြန့်နှံ့နေသောသင်ခန်းစာများကိုသင်လိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ သင့်ရဲ့ Android terminal ကိုပင် rooted ရှိသည်မဟုတ်.
နောက်ကွယ်မှရှိနေသော Android အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအားကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကျေးဇူးတင်ရမည်နည်း အဆိုပါ XDA Developers ဖိုရမ်မိုဘိုင်း operating system များကိုရည်ညွှန်းသည့်အရာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 Motorola ပြခန်းအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
2 Motorola ပြခန်းအက်ပ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
၎င်းသည်ပြခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Android ဓာတ်ပုံပြခန်းနှင့်ဆင်တူမှုများစွာရှိသော်လည်း Motorola မှဤပြခန်း application သည် Android Lollipop ၏ Material Design စတိုင်ဖြင့်လုံးဝပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်အသစ်များနှင့်အတူကင်မရာကနေအဆင်သင့်မြင်ကွင်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပါသည် အဖြစ်အပျက်နှင့်အချိန်အမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြား.
အပြင် app အိုင်ကွန်အသစ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံများဖြတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပြောင်းလဲမှုများကိုယခင် application ၏ယခင်ဗားရှင်းများထက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းရှာတွေ့နိုင်သည်။
မသန်စွမ်း Motorola ပြခန်းအက်ပ်ကိုထည့်ပါဤဆောင်းပါး၏ပထမအပိုဒ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်ယခင်က Root လုပ်သော terminal သို့မဟုတ်စနစ်အတွင်းရှိမည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို flash ရှုပ်ထွေးစေရန်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး APK ကို download လုပ်ပါ ပြီးပါက download လုပ်ထားသောအကြောင်းကြားစာကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။ Play သိထားနှင့်ပြီးသား application များကို Play Store ပြင်ပတွင်တပ်ဆင်ရန်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော option ကိုအရင်ထားရမည်။ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
ဒေါင်းလုပ် - ပြခန်း Motorola APK
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » [APK] မည်သည့် Android terminal တွင်မဆို Motorola ပြခန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
သူက Nexus4မှာ install လုပ်မထားဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ Nexus4တွင်တပ်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
၅.၁ နှင့်အတူ Nexus5တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
Andres Guirado ဟုသူကပြောသည်
Nexus6မှာ 5.0.1 နဲ့ install လုပ်လို့မရပါဘူး
Andres Guirado သို့ပြန်သွားပါ
သူက Samsung S5 မှာ install မထားဘူး။
Brian martinez ဟုသူကပြောသည်
CM412 ရှိသည့် s5.0.2 တွင်မပါ
Brian Martinez အားပြန်ပြောပါ
Motorola Moto G 2013 တွင် LP 5.0.1 GPE မထည့်ပါ
အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ၎င်းကိုမည်သည့် android terminal တွင် install လုပ်၍ မရပါ၊
ငါ LG G2 ကိုသုံးတယ်။ ငါ့ကို install လုပ်ခွင့်မပြုဘူး။ အဖြေတစ်ခုရှိမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
ဟိုဆေးလူးဝစ် Ces Lameiro ဟုသူကပြောသည်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... ဒီ link ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှ application ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ 🙁
José Luis Ces Lameiro ကိုပြန်ပြောပါ
Felipe Londoño ဟုသူကပြောသည်
ငါ link ကိုမမြင်ရပါ
Jordi Cañal Espinosa ဟုသူကပြောသည်
Android5ဖြင့် Nexus 5.0.1 တွင်တပ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ
Jordi Cañal Espinosa အားပြန်ပြောပါ
သူတို့ဟာ Sony Xperia C3 မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ဖာနန်ဒို Gonzalez Monsalve ဟုသူကပြောသည်
Sony Xperia Z3 တွင်တပ်ဆင်။ မရပါ
ဖာနန်ဒို Gonzalez Monsalve အားတုံ့ပြန်ပါ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ် Moto G4 ကိုဝယ်ခဲ့သည်။
၎င်းတွင်ပုံမှန် Moto Gallery မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Play စတိုးအတော်များများကိုကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကြော်ငြာများသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Root ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲပုံမှန်အတိုင်းတပ်ဆင်နိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြနိုင်ပါသလား။